Testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေခြင်းနှင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအကြားဆက်နွယ်မှု (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
စိုက်ထူ: Neurotransmitters, ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နေရာများ
Testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အမျိုးသားတို့၏ကျန်းမာရေး (၂၀၁၃)
ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Mens ကနျြးမာရေး။ 2013 သြဂုတ်လ; 31(2): 126-135 ။
2013 သြဂုတ်လ 31 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.5534 / wjmh.2013.31.2.126
Testosterone ဟော်မုန်းသည်အင်္ဂါအမျိုးမျိုးနှင့်တစ်ရှူးများ၏ဇီဝကမ္မဗေဒတွင်အရေးပါသည်။ အဆိုပါသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအိုမင်း၏ဖြစ်စဉ်များ၏တ ဦး တည်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်း။ ထို့ကြောင့်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်း hypogonadism ဟူသောအယူအဆသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော hypogonadism ၏လက္ခဏာများကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့် erectile အရည်အသွေးများအထူးသဖြင့်ညဘက်တွင်စိုက်ထူခြင်း၊ အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့် Spatial orientation၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားလျော့နည်းလာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်နှင့်အရေပြားပြောင်းလဲခြင်းများကျဆင်းခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရိုးတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆများလျော့နည်းလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုးအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဟာဆီးလမ်းကြောင်းကုသရာမှာအသုံးအများဆုံးနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာဟာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့ hypoactive လိင်စိတ်လိင်စိတ်နဲ့ဆက်စပ်တာကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုဟာဒီရောဂါလက္ခဏာကိုပိုကောင်းစေတယ်ဆိုတာလူသိများတယ်။ မကြာသေးမီကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပြင်ဗဟိုအဝလွန်ခြင်း၊ အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်း၊ dyslipidemia နှင့်သွေးတိုးရောဂါနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါအကြားနီးကပ်သောဆက်နွယ်မှုနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှအချို့သောနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သော hypogonadism ကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ကျပန်းထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများအရ testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုသည်အဝလွန်ခြင်းအတွက်အားသာချက်အပြင်အင်ဆူလင်ခုခံမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အဓိကအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်သည် atherosclerosis ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ လက်ရှိတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone အဆင့်နိမ့်ခြင်းသည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုမြင့်တက်စေသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ထို့ကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းသည်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသားတို့၏အဓိကမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။
keywords: testosterone, Hypogonadism, Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, သွေးကြော, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ
testosterone ပစ်မှတ်ဆဲလ်၏နျူကလီးယပ်စမှာတည်ရှိပါတယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူ binding မှတဆင့်၎င်း၏ဇီဝအရေးယူမှုအများစုကိုပြုပြင်။ ဒါဟာကောင်းစွာ testosterone ဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုကဲ့သို့သောအရေပြား, ကြွက်သား, အသည်း, အရိုး, ရိုးတွင်းခြင်ဆီ, ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အန်ဒရိုဂျင် receptor များတည်ရှိသည့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်တစ်ရှူးများ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းလူသိများသည်။ သို့သော်ဇရာ၏ဖြစ်စဉ်များတဦးသည်အတိုင်း, သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုတဖြည်းဖြည်းအထူးသဖြင့်အသက် 1.6 နှစ်အကြာ, အိုမင်းနှင့်အတူတစ်နှစ်လျှင် 40% အားဖြင့်ငြင်းပယ်။ အနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအထီးစစ်ပြန်အတွက်တိုးချဲ့သေဆုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်, ထို့ကြောင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်စဉ်အာရုံစူးစိုက်မှုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတောင်မှသက်ကြီးရွယ်အိုယောက်ျားအတွက်, ကျယ်ပြန့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။1 ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော hypogonadism (LOH) ၏အယူအဆသည်ရှေ့တန်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။ LOH ကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလက်တွေ့နှင့်ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပုံမှန်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအန္ဒရိုဒယ်လ်လူ့အဖွဲ့အစည်း (ISSAM) မှသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားလေ့လာမှုအဖွဲ့အစည်း (ISSAM) ကသတ်မှတ်ထားသည် ) နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် European Urology of Association (EAU) ။2 လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးအမျိုးသား ၂,၉၆၆ ၏ဥရောပအမျိုးသားအိုမင်းခြင်းလေ့လာမှုတွင် LOH နှုန်း (သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ <2,966 ng / ml၊ အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ ၆၄ pg / ml နှင့်အနည်းဆုံးလိင်လက္ခဏာ ၃ ခု) ကို ၂.၁% တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် အသက် ၄၀ နှင့် ၇၉ နှစ်ကြားရှိအမျိုးသားများဖြစ်သည်။3 , ဂျပန်မှာတော့ Loh များအတွက်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကို manual လည်းရောဂါများအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြံပြုဖို့အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသား (JSSAM) ၏လေ့လာမှုများအတွက်ဂျပန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်း (JUA) နှင့်ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းကနေပူးပေါင်းအဖွဲ့ကရေးသားထုတ်ဝေထားပြီး, ကုသမှု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး (TRT) ငှါ၎င်း, post-ကုသမှုအကဲဖြတ်ဘို့ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများ၏စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။4 Loh ၏အစီရင်ခံရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအလွယ်တကူအသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ erectile အရည်အသွေးကိုလျော့ features အသစ်တွေလည်းပါဝင်, အထူးသဖြင့် nocturnal စိုက်ထူအတွက်အသိပညာဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်း concomitant လျှောက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် Spatial တိမ်းညွတ်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အမျက်ဒေါသနှင့်အတူစိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲမှုများအတွက်ဆက်စပ်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုတစ်ခုကျဆင်းခြင်း ကြွက်သားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုခန္ဓာကိုယ်ကဆံပင်နှင့်အရေပြားကိုပြောင်းလဲတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်အရိုးပွရောဂါအတွက်ရရှိလာတဲ့အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားသည်။5-10 Loh ဤရောဂါလက္ခဏာများအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု urology ၏လယ်ပြင်တွင်ဆကျဆံဖို့အသုံးအများဆုံးနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကအလယ်ပိုင်းအဝလွန်ခြင်း, အင်ဆူလင်ကိုခုခံ, dyslipidemia နှင့်သွေးတိုးရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, Loh နဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ် Syndrome (က MS) အကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအပြင်အများအပြား epidemiological လေ့လာမှုများအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာက MS ဘုံသည်နှင့်အများအပြားလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရောဂါများနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်က MS ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏လယ်ပြင်တွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိထားသူသောအရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ (CVD) ၏တစ်ဦးတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ကြောင်းလူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်က Testosterone နဲ့ CVD အကြားဆက်ဆံရေးကိုလည်းပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်ရောဂါနှင့် CVD ရောဂါများအကြားရှိအမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအာရုံစိုက်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်အမျိုးသားများ၏ဘဝအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, အထူးသဖြင့် hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, ညပိုင်းနှင့်နံနက်ပိုင်းစိုက်ထူမှုလျှော့ချခြင်း, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), သုက်ပိုးသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်သုတ်ရည်ပမာဏကိုလျှော့ချ, ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နိမ့်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ များစွာသောလိင်လက္ခဏာလက္ခဏာများအနက်မှ erectile function သည်အာရုံစူးစိုက်မှုအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးသွေးရည်ကြည် testosterone level နှင့်အများဆုံးဆက်စပ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျနည်းပါးသော testosterone ဟော်မုန်းနည်းခြင်းသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောအမျိုးသားများအတွက် ED ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမဟုတ်သလောက်ဖြစ်သော်လည်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲသည် ED များစွာသောကိစ္စများတွင်လက်အောက်ခံအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်လူ၏သန္ဓေသားလောင်းသည် erectile function ကိုအားနည်းစေပြီးပုံမှန်စိုက်ထူခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများသည် erectile function တွင် testosterone ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္evidenceကိုသက်သေပြခဲ့သည်။11-14 ထို့အပွငျက nocturnal စိုက်ထူပုံမှန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုနှင့်အတူလူထက်နိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူလူနာကိုလည်းသိသိသာသာအားနည်းကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်,15 ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့ testosterone ဟော်မုန်းလုပ်ရပ်များအတွက်စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပေမယ့်လူသားများတွင် elucidated ခံရဖို့ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အရင်က erectile function ကိုများအတွက်နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏ရာထူးအမည်-5 ရမှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လက္ခဏာများနှင့်အတူ 130 ယောက်ျားတစ်ဦးလေ့လာမှုမှာသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်တိုးနှင့်အတူသိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။10 အဆိုပါ cortex ကနေချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်များနှင့် endothelial function ကိုရန် midbrain နှင့်ကျောရိုးမှတဆင့် penile စိုက်ထူအစေခံသောလမ်းကြောင်း၏အများဆုံးအဆင့်ဆင့်မှာ testosterone ဟော်မုန်းများ၏အခြေခံအရေးပါမှု, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အတန်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်အတူပါဆုံးလူနာများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောနေရာအရပ်ပေးသည် ED ။ erectile function ကို၏တိုးတက်မှုအတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏ယန္တရားမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှု testosterone ဟော်မုန်း Peripheral နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase လှုပ်ရှားမှုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။16 လူသားမြားသညျတှငျ, ဒါ့အပြင် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ၏အုပ်ချုပ်ရေးပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း hypogonadal ED လူနာအတွက်အဆင့်ဆင့်နှင့်ဘာသာရပ်များ၏ 61% အတွက်တိုးတက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပွနျလညျထူထောငျမှုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။17 ရလဒ်များအရအိပ်ယာမှနှိုင်းယှဉ်လျှင် erectile function ကိုတစ်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု 17 တစ် Meta-analysis သည်၌တွေ့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအသက်-အလယ်တန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလူတို့ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုတွေ (RCTs) randomized ။18 ယေဘုယျအားဖြင့် ED များအတွက်ကုသမှု၏ပထမဆုံးရှေးခယျြမှု sildenafil citrate ၏နိဒါန်းကတည်းက phosphodiesterase type ကို5(PDE5-ငါ) ၏ရွေးချယ် inhibitor ၏အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါးစပ် PDE5-သည် ED များအတွက်ကောင်းစွာသည်းခံကုသမှုကွသျောလညျး PDE5-ငါကုထုံးမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆက်ဆံဖို့စိန်ခေါ်စဉ်းစားသီးခြားလူနာလူဦးရေထိုကဲ့သို့သောအစွန်းရောက် prostatectomy, များတွင်ဆီးချိုရောဂါများနှင့်ပြင်းထန်သောသွေးကြောရောဂါကနေရရှိလာတဲ့ကြောင်းအဖြစ်ပြင်းထန်အာရုံကြောပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာလည်းပါဝင်သည် ။19 ထို့ကြောင့်, အပိုဆောင်းကုထုံးမဟာဗျူဟာဤပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့လိုအပ်နေပါသည်။ ဤကိစ်စတှငျက TRT မူလက PDE5-ငါရန်မတုန့်ပြန်ပြသခဲ့သောအမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူ restore နိုင်သည်ကိုအစီရင်ခံထားသည်20,21 ၎င်းသည် RCT တွင်တွေ့ရှိသည့်အတိုင်းစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ ၃ <ng / ml ရှိသည့် hypogonadal အမျိုးသားများသာအထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသည်။22 လက်ရှိအချိန်တွင်တစ် testosterone ဟော်မုန်းပြင်ဆင်မှုအတူတကွ PDE5-ငါနှင့်အတူ, ED ၏ကုသမှုတစ်ခုအပိုဆောင်းကိရိယာတခုဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။
Hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်အခြားထင်ရှားတဲ့နှင့်မကြာခဏ ED နှင့်အတူတင်ပြလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် Low ပျက်ကွက်လိင်စိတ်တစ်လျော့နည်းသွား testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်း psychogenic အချက်များ, အခြားတ္ထုများ, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်နာမကျန်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုတချို့ယောက်ျားရှိပါတယ်ပေမယ့်အမှန်စင်စစ်ဆီးရောဂါပါရဂူ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်သင်းနဲ့ကုသယောက်ျားအတွက်လိင်စိတ်၏လျင်မြန်စွာပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ အများအပြားက Cross-Section လေ့လာမှုများသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အိုမင်းပြင်ပလူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆငျ့အကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပြခဲ့ကြ23,24 နှင့် ED နှင့်အတူယောက်ျား။25,26 တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှုလည်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြားရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပြတော်မူ၏။27 အဆိုပါ Olmsted ကောင်တီလေ့လာမှု, ဘာသာရပ်များ၎င်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုအတူမြင့်မား testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦးတိုးအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့သည်။28 လျှော့ချလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ hypogonadism မှအဓိကအားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, RCTs နှစ်ခု Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း TRT ပြီးနောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။25,26 ဒါကြောင့်တစ်ဦးဇီဝကမ္မသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ပညာရေးထက်အခြား Testosterone နဲ့ hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Testosterone နဲ့ ejaculatory function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးအများအားဖြင့်မှန်းဆဖြစ်နေဆဲ,29 ကကောင်းစွာ testosterone ဟော်မုန်းသုက်နှင့်ထုတ်လွှတ်၏အရည်အသွေး၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောလက်တွေ့ setting ကိုအတွက်လူသိများသည်ပေမယ့်။ ထိုကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် anejaculation အဖြစ် Ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်အခြေအနေနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုမရှိခြင်း၏ဆွေမျိုးရှားပါး၏အနည်းဆုံးလေ့လာအနည်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ တစ်ဦးက testosterone ဟော်မုန်းပြင်ဆင်မှုကုသမှုများအတွက်သာ tool ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ် ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသအတွက် TRT ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. , ejaculatory စွမ်းရည်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု serotonergic စိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူဆက်လက်သူကိုအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ယောက်ျားအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အတူတူယူ testosterone ဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့ ED, hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် orgasm ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအများအပြားမျိုးစုံမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။30
က MS အလယ်ပိုင်းအဝလွန်ခြင်း, အင်ဆူလင်ကိုခုခံ, dyslipidemia နှင့်သွေးတိုးရောဂါဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်ဆေးဝါးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးများ၏နယ်ပယ်များတွင်တိုးမြှင့်အာရုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်အခြားရောဂါ syndrome ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။31 က MS ၏ pathogenesis multifactorial ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤသွေးရည်ကြည်အနိမ့်-သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း (LDL), အနိမ့်သွေးရည်ကြည်က high-သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်း (HDL) နှင့် hyperglycemia တိုးတက်သွေးတိုးရောဂါဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအလယ်ပိုင်းအဝလွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။31 တစ်ဦးကအနီးကပ်ပြောင်းပြန်စပ်လျဉ်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အမျိုးသားများတွင်အဝလွန်ခြင်း၏ဒီဂရီအကြားတည်ရှိနေသတင်းပို့ခဲ့သည်။32,33 အထူးသဖြင့်, ကဗဟိုအဝလွန်ခြင်းပြောင်းပြန်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အထိ related ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ခဲ့သည်။34-36 ဒါဟာယခင်ကသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားအတွက်, ပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုနှင့်ကြွက်သားထုထည်ဟာသွေးရည်ကြည်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူပတျသကျကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။37-39 ထို့အပွငျကအဝလွန်ခြင်းက MS များအတွက်အဖြေရှာတဲ့အချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့်များတွင်ဆီးချိုရောဂါစတင်ခြင်း, ကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်ဆေးခန်းကိုလက်ခံသည်။
ဆီးချိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ကကောင်းစွာ, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ကုထုံးအင်ဆူလင်ကိုခုခံတိုးပွါးကြောင်း urology အတွက်လူသိများသည်40,41 နှင့်အမှန်ပင်, ထိုသွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပြောင်းပြန်အမျိုးသားတွေအတွက်အင်ဆူလင်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံဖို့ related ဖြစ်ပါတယ်။42 အမျိုးသားများတွင်အများအပြား epidemiological လေ့လာမှုများနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါ (T2DM) အကြားတစ်ဦးနှင့်နီးစပ်သူအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပြသကြ43-45 မကြာသေးမီကပြုလုပ် Loh နှင့်အတူပစ္စုပ္ပန် T2DM နှင့်အတူယောက်ျား၏တတိယအကြောင်းကိုကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။46 longitudinal လေ့လာမှုများမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသို့သော် Cross-Section လေ့လာမှုများအတွက်အနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့် T2DM အကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအင်ဆူလင်ကိုခုခံခြင်းနှင့် T2DM ၏ဖြစ်ပွားမှုများအတွက်ရှေ့ပြေးသောအချက်ဖြစ်ပါသည် ကျန်းမာယောက်ျား၏။47-49 ဆီးချိုရောဂါအဘို့အ TRT များ၏ထိရောက်မှုစဉ်းစားသည်အခါ, သုံးမကြာသေးမီကြီးမားသော RCTs တသမတ်တည်းအင်ဆူလင်ကိုခုခံအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းပြ50-52 ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်ပေမယ့် testosterone ဟော်မုန်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုနေဆဲကိုက်ညီမှုများနှင့်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုထက်လျော့နည်းသိသာပေါ်လာပါသည်။
နိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့် lipids, သွေးရည်ကြည်လက်စထရောလ်တစ်ခုတိုး, LDL လက်စထရောနှင့် triglyceride အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ကဲ့သို့၎င်း, HDL လက်စထရောတစ်ကျဆင်းခြင်းအန်ဒရိုဂျင် ablation ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။53 lipid ဇီဝြဖစ်ဘို့အဖြစ်အင်ဆူလင်ကိုခုခံဘို့ TRT များ၏ထိရောက်မှု exogenous testosterone ဟော်မုန်းစုစုပေါင်းလက်စထရောနှင့် LDL လက်စထရောများသွေးရည်ကြည်အဆင့်ကိုလျှော့ချထိုကဲ့သို့သောအသက်-အလယ်တန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားနှင့်အတူ RCTs ၏မကြာသေးမီ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်အစီရင်ခံထားသည်။18,54
သွေးတိုးရောဂါနှင့် ပတ်သက်. ပြုလုပ်လည်းသွေးဖိအားအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနေဆဲမသိရသေးသော်လည်းအဆိုပါသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်သွေးဖိအားအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေးရှိကွောငျးစောဒကတက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံး transdermal testosterone ဟော်မုန်းဝမ်းဗိုက်အဝလွန်အမျိုးသားများအတွက် diastolic သွေးဖိအားအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးပြသကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။55 နောက်ထပ်လေ့လာမှုအရိုးပွရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားတို့အတွက် TRT အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးနှလုံးကျုံ့နှင့် diastolic သွေးဖိအားအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။56 ထို့ပြင်အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပေါင်းစပ် TRT က MS နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်အစားအသောက်နှင့်တစ်ဦးတည်းလေ့ကျင့်ခန်းအတူကုသမှုထက် antihypertensive လှုပ်ရှားမှုပိုမိုထိရောက်သောခဲ့သည်။57 တစ်ဦးကအလားအလာလေ့လာမှုအခြေခံမှာအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာခန့်မှန်းကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။58 2,966 လူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျား၏ဥရောပအမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု Loh နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားခန္ဓာကိုယ် Mass Index (BMI), ပိုမိုမြင့်မားခါးလုံးပတ်, နိမ့် HDL လက်စထရောအဆင့်မြင့် triglyceride အဆင့်မြင့်နှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားများနှင့်မြင့်မားသောဂလူးကို့စ, အင်ဆူလင်, ရှိခဲ့ပါတယ်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ နှင့် homeostasis မော်ဒယ်အကဲဖြတ်-ခန့်မှန်းအင်ဆူလင်ကိုခုခံ (HOMA-မှာ IR) တန်ဖိုးများ။59 ပြောင်းပြန်ဟာအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုရှိခြင်း၏လေးသာမှုအချိုးသွေးတိုးရောဂါ (1.84) နဲ့အမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြသည်, hyperlipidemia (1.47), ဆီးချိုရောဂါ (2.09) နှင့်အဝလွန်ခြင်း (2.38) အနည်းဆုံး 2,000 မှာအသက် 45 ယောက်ျားထက် ပို. အတူလေ့လာမှုမှာ အသက်အနှစ်။60 ဤဆောင်းပါး၌ပြန်လည်သုံးသပ်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားသောကြောင့်ဒီအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ယန္တရားလုံလုံလောက်လောက် elucidated ရသေးပေမယ့်တစ်ဦးအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို, အဝလွန်ခြင်း, hyperglycemia, hyperlipidemia နှင့်သွေးတိုးရောဂါများအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီအများအပြားဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခနျ့မှနျး ။
TRT က MS များအတွက်ကုသမှုများအတွက်မဟာဗျူဟာသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း, စိုးရိမ်ပူပန် TRT ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါသောသွေးရည်ကြည် adiponectin အဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိ။ Adiponectin အဆိုပါ adipocytokines ၏အပေါများဆုံးဖြစ်ပြီး Anti-ဆီးချိုလေးနက်တဲ့ပြုပြင်, Anti-atherogenic, နဲ့ anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လည်းက MS ၏ etiology အတွက်သော့ချက်မော်လီကျူးဖြစ်ဟုယုံကြည်နေသည်။61,62 စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်မှာအဆိုပါသွေးရည်ကြည် adiponectin အဆင့်ကိုပြောင်းပြန်ကြွက်များတွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အထိ related ဖြစ်ပါတယ်။63 ဒါဟာပုံမှန်အကွာအဝေးဖို့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသော, TRT ၏စတင်ပြီးနောက်6လအတွင်းမှာ eugonadal ယောက်ျားနဲ့သောများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားနေကြသည်, ထို adiponectin အဆင့်ဆင့်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည် hypogonadal ယောက်ျားအတွက် adiponectin အဆင့်ဆင့်သွေးရည်ကြည်တဲ့အတော်လေးနုပျိုသောလူဦးရေအတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည် အဆိုပါ hypogonadal ယောက်ျား၌တည်၏။64 TRT adiponectin ၏လျော့နည်းသွားအဆင့်ဆင့်၏ရလဒ်အဖြစ်က MS ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ထို့ကြောင့်က MS များအတွက် TRT ၏အားသာချက်အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်. ငါတို့သည်နောက်ပြောင်းပြန်စပ်လျဉ်း Loh နှင့်အတူလက်ခဏာအဟောင်းတွေလူနာနှင့် TRT အသက်ကြီးအတွက် adiponectin အဆင့်ဆင့်မထိခိုက်ပါဘူး adiponectin နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားတည်ရှိကြောင်းယခင်ကရှင်းလင်းတင်ပြသည်။65 ထို့ကြောင့် TRT, အထူးသဖြင့် Loh နှင့်အတူလူနာအတွက်သွေးရည်ကြည် adiponectin အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်က MS inducing ၏ကြီးမားသောစွန့်စားမှုရှိုးမှပေါ်လာပါဘူး။ လူနာပိုကြီးတဲ့ဂဏန်းနှင့်အတူအပိုဆောင်းလေ့လာမှုများက၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းလက်ရှိတွင် TRT, က MS ဘို့တ optional ကိုကုသမှုဖြစ်နိုင်သည်။
အနိမျ့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းက MS ၏တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူဒါပေမယ့်လည်းက MS ကိုယ်တိုင်ကနှင့်အတူမသာဆက်စပ်နေပါတယ်။ အနိမျ့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်တိုက်ရိုက် Cross-Section မှာက MS နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့အစီရင်ခံခဲ့ကြ66 နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများ။67 အများအပြားကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုက MS မရှိဘဲသူတို့အားထက်က MS ရှိသူများအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။68,69 2.64% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI]; က MS နှင့်အတူဘာသာရပ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပါဝင်လေ့လာမှုများ၏မကြာသေးမီက Meta-analysis သည်ကိုလည်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို, -95 nmol / L ကိုခြားနားချက်ကိုဆိုလိုတာ (က MS မပါဘဲယောက်ျားထက်က MS နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်နိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြသ , -2.95 မှ -2.32) ။70 အလားတူတွေ့ရှိချက်ကော့ကေးဆပ်ယောက်ျားနှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအာရှယောက်ျားနှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်သာအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများခံယူတဲ့သူလူလတ်ပိုင်းဂျပန်ယောက်ျား၏တစ်ဦးကလေ့လာမှုသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလည်းက MS မပါဘဲကြောင်းထက်က MS နှင့်အတူအုပ်စုတွင်သိသာထင်ရှားစွာနိမ့်ခဲ့သဖြင့်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုက MS များ၏အရေအတွက်တိုးနှင့်အညီသိသိသာသာလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသ ပစ္စုပ္ပန်အစိတ်အပိုင်းများကို။71 အဲဒီလေ့လာမှုကနောက်ထပ်အသက်, BMI နှင့်ခါးလုံးပတ်အဘို့အညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုနေဆဲက MS နှင့်အတူသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လူလတ်ပိုင်းဂျပန်ယောက်ျားနှင့်အတူနောက်ထပ်လေ့လာမှုကိုလည်းအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလေ့လာဆန်းစစ်အသက်အရွယ်-ချိန်ညှိဆုတ်ယုတ်ခြင်းဖြင့် MS ၏တစ်ဦးချင်းစီအချက်များအသီးအသီးမှသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။72 ထို့အပြင် MS ၏ဖြစ်နိုင်ချေပိုမိုမြင့်မားသောအလားအလာကိုအသက်အရွယ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်တစ်ခုတွင်သွေးတွင်းစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်အဆင့်နှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုရှိသည်မှာထင်ရှားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ MS ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း၏လက်တွေ့တန်ဖိုးကိုမကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သည်။ longitudinal လေ့လာမှုများတစ် meta- ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအခြေခံ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ထိန်းချုပ်မှု (p <1,150) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအဖြစ်အပျက်က MS နှင့်အတူယောက်ျားအတွက် 2.17 nmol / L ကိုနိမ့်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။73 လက်ရှိမှာသူကကောင်းကောင်း, တစ်ဦးအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအဘယ်သူ၏ testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ခွဲစိတ်အောက်ပါမျိုးရိုးဗီဇသို့မဟုတ် iatrogenic ဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားအတွက်က MS တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော၏အခြင်းအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်လက်ခံသည်67,74,75 သို့မဟုတ် pharmacologically ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းဟော်မုန်း-releasing gonadotropin အားဖြင့်သွေးဆောင်။76
အတိတ်ကာလများတွင် testosterone ဟော်မုန်းနှလုံးသွေးကြော function ကိုအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့သော် cross-section epidemiological Meta-analysis သည်ယင်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို CVD နှင့်အတူလူနာအတွက်အနိမ့်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။77 စိတ်ဝင်စားစရာကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့် CVD အကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခု Logistic ဆုတ်ယုတ်အသက်အရွယ်များအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်မော်ဒယ် BMI, ဆီးချိုရောဂါများနှင့်သွေးတိုးရောဂါအတွက်လျှော့ချခဲ့ပါဘူး။ မကြာမီကပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများလည်းလျော့နည်းသွားသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့် CVD ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။78,79
သွေးကြော CVD များအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာပုံမှန် calcified aortic plaque ၏ရှေ့မှောက်တွင်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်ဖြစ်သောကြောင့်သွေးကြောအကဲဖြတ်ရန်ရန်, carotid သွေးလွှတ်ကြောများ၏ brachial သွေးလွှတ်ကြောများနှင့် intima မီဒီယာအထူ (IMT) ၏စီးဆင်းမှု-mediated dilation (FMD) တိုင်းတာအမှတ်အသားများအဖြစ်ဆေးခန်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။80 အတူအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်အနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့ FMD ပြီးသားဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည် CVD အဘို့အမြင့်မားသောစွန့်စားမှုအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လျော့နည်းသွားသည်။81 ယောက်ျား၏အခြားလေ့လာမှုများကြောင့်နိမ့်သွေးရည်ကြည်အတွက်စုစုပေါင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုသိသိသာသာနဲ့ဆက်စပ်နေကြတယ်, အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုပြသကြ FMD လျော့နည်းသွားသည်။82,83 အဆိုပါသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူ IMT တစ်ခုပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့လည်းထိုကဲ့သို့သောအလွန်အသက်ကြီးအဖြစ်ဘာသာရပ်များအတော်ကြာတိကျတဲ့အမျိုးအစားများလေ့လာမှုတစ်ခုအစီရင်ခံခဲ့ပြီး,84 T2DM နှင့်အတူယောက်ျား,85 နှင့်ဂလူးကို့စသည်းမခံနှင့်အတူအဝလွန်အမျိုးသားများ။86 မကြာသေးမီကယောက်ျား၏ကြီးမားသောလူဦးရေ-based လေ့လာမှုလည်းပြောင်းပြန်အသက်အရွယ်-ချိန်ညှိ IMT နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုပြသသည်။87 ကြောင်းလေ့လာမှုတွင်, CVD အန္တရာယ်အချက်များ၏သဖွငျ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ချိန်ညှိနေတဲ့ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်နိမ့်ဆုံးငါးပုံအုပ်စုအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူတို့သညျအမြင့်ဆုံး IMT ငါးပုံအုပ်စုထဲမှာဖြစ်ခြင်း၏လွတ်လပ်သောလေးသာမှုအချိုးအစား (1.51) ရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။87 testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့နှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းယောက်ျား၏နောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု IMT အသက်အရွယ်နှင့်အတော်ကြာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ခြင်းနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်များများအတွက်ချိန်ညှိ multivariate မော်ဒယ်များအတွက်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။80 ကျနော်တို့ကိုလည်းအောက်ပိုင်းသွေးရည်ကြည်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလူလတ်ပိုင်းဂျပန်အမျိုးသားများတွင် IMT တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား Level ဖြင့်နှင့်ဤအသင်းအဖွဲ့အသက်အရွယ်နှင့်အတော်ကြာဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအချက်များများအတွက်ချိန်ညှိသည့် multivariate မော်ဒယ်အတွက် attenuate မပြုခဲ့ကြောင်းဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။88 စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု longitudinal လေ့လာမှုကိုလည်းအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူယောက်ျားတစ်ဦး4နှစ်နောက်ဆက်တွဲကာလအတွင်း IMT မွှငျ့တငျဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။89 အဆိုပါ FMD နှင့် IMT တွေ့ရှိချက်ထက်အခြား, တကနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတူယောက်ျား endothelial function ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့် CVD နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လျှော့ချထားတဲ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့ endothelial progenitor ဆဲလ်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်လူသိများသည်။90,91 စိတ်ဝင်စားစရာက TRT hypogonadism နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် endothelial progenitor ဆဲလ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့များ၏အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။92 ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာ, က testosterone ဟော်မုန်းသွေးကြောများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောတစ်ဦးမော်လီကျူးကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
ဒါဟာပြီးသားပင်ဇီဝကမ္မပြင်းအားမှာ testosterone ဟော်မုန်း၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးတိုက်ရိုက်ထိုး-မှီခိုအတွက်နှလုံး catheterization တိုးသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးစီးဆင်းမှုနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာ vasodilatation လျှက်ယောက်ျားအတွက်သွေးကြောဆိုင်ရာရေယာဉ်များသို့သက်သေပြခဲ့လို့ testosterone ဟော်မုန်းဟာသွေးကြောဆိုင်ရာ vasodilator အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်နှလုံး ischemia တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုခနျ့မှနျး ထုံးစံ။93 RCTs TRT လေ့ကျင့်ခန်းစမ်းသပ်ကာလအတွင်း 1-မီလီမီတာ ST စိတ်ကျရောဂါဖို့အချိန်ရှည်ကြောင်းပြသကြ94 နှင့်နာတာရှည်တည်ငြိမ် angina နှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် ST စိတ်ကျရောဂါရမည့်အချိန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။95,96 သွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းဂျပန်အမျိုးသားများတွင်တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုကိုလည်းအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။97 တစ်ဦး RCT တစ် testosterone ဟော်မုန်းပြင်ဆင်မှု၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ဦးဇီဝကမ္မအဆင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုနှလုံးပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည်းခံစိတ်နှင့်အတူလူနှစ်ဦးစလုံးနှလုံးရောဂါအခွအေနေတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။98 အမှန်မှာကအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအမျိုးသားများတွင်တိုးချဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသေဆုံးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။99-101 CVD ရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းရန်, သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျား၏ 19 အလားအလာလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ်၏ခန့်မှန်းခြေဆွေမျိုးစွန့်စားမှုနှင့်အတူအားနည်းလွတ်လပ်သောအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့တွေ့သော testosterone ဟော်မုန်းအတွက် သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအတွက် 0.89 စံသွေဖည်နေတဲ့အပြောင်းအလဲအတွက် 0.83 (CI 0.96 ~ 1) ။102 အတော်ကြာ Interventional လေ့လာမှုများအဆင်သင့်ရလဒ်များကိုပြခဲ့ကြသောကြောင့်, ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တစ်ဦးအနိမ့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို CVD ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့် TRT CVD အပေါ်တစ်ဦးအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါသဘောတရားများကိုကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး, ကတဖြည်းဖြည်း testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ယောက်ျားအတွက်အစောပိုင်းသေမင်း၏တစ်ဦးအမှတ်အသားနှင့် testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့သွေးကြောတစ်အကြောင်းမရှိသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်မသိရသေးပေပေမယ့်နီးကပ်စွာ, သွေးကြောများ၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်ဒီဂရီနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်လာသည်။
ဤအိုမင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အမျိုးသားများ၏ကျန်းမာရေးအတွက် testosterone သည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ကျသောသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် MS နှင့် CVD နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြုရန်လိုသည်။ ရေရှည်တွင်ရလဒ်များအရရလဒ်များအရရလဒ်များအရရလဒ်အရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီရောဂါလက္ခဏာများသည် TRT သည် MS နှင့် CVD တို့ကိုကုသရာတွင်အမှန်တကယ်ထိရောက်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာကောက်ချက်ချရန်လိုအပ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏။
1 ။ ကမ်းခြေဟာ MM, Matsumoto လေး, Sloan KL, Kivlahan DR ။ အထီးစစ်ပြန်အတွက်အနိမ့်သွေးရည်ကြည် Testosterone နဲ့သေဆုံးမှု။ Arch International Med ။ 2006; 166: 1660-1665 ။ [PubMed]
2 ။ Nieschlag အီး, Swerdloff R ကို, Behre HM, Gooren LJ, Kaufman JM, Legros JJ, et al ။ Andrology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်း (ISA); အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသား (ISSAM) ၏လေ့လာမှုသည် ဖြစ်. , Urology ၏ဥရောပအသင်းကယောက်ျားနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism ၏ (EAU) စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, ကုသမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး။ ISA, ISSAM နှင့် EAU အကြံပြုချက်များ။ EUR Urol ။ 2005; 48: 1-4 ။ [PubMed]
3 ။ ဝူ FC အသင်း, Tajar တစ်ဦးက, Beynon JM, et al Pye SR, Silman AJ, ဖင်လန် JD ။ EMAS Group မှ။ အသက်-အလယ်တန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism ၏ identification ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 2010; 363: 123-135 ။ [PubMed]
4 ။ Namiki M က, Akaza H ကို, Shimazui T က, Ito က N ကို, Iwamoto T က, Baba K သည်, et al ။ နှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း Hypogonadism များအတွက်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ်လုပ်ငန်းကော်မတီ; အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသား၏လေ့လာမှုများအတွက်ဂျပန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံး / ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အိုမင်းခြင်းဟာအမျိုးသား၏လေ့လာမှုများအတွက်ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism syndrome ရောဂါများအတွက်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကို manual ။ int J ကို Urol ။ 2008; 15: 377-378 ။ [PubMed]
5 ။ Morley je ။ အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အိုမင်း။ Maturitas ။ 2001; 38: 61-71 ။ [PubMed]
6 ။ Morales တစ်ဦးက, Buvat J ကို, Gooren LJ, Guay ကို AT, Kaufman JM, Tan က HM, et al ။ အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ endocrine ရှုထောင့်။ J ကိုလိင် Med ။ 2004; 1: 69-81 ။ [PubMed]
7 ။ Morley je, ပယ်ရီ HM ။ , အိုမင်းယောက်ျားအတွက် 3rd အန်ဒရိုဂျင်ချို့တဲ့။ Med Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1999; 83: 1279-1289 ။ [PubMed]
8 ။ Vermeulen အေ Andropause ။ Maturitas ။ 2000; 34: 5-15 ။ [PubMed]
9 ။ Morales တစ်ဦးက, Heaton JP, Carson CC ကို, 3rd Andropause ။ စစ်မှန်သောလက်တွေ့ entity တစ်ခု misnomer ။ J ကို Urol ။ 2000; 163: 705-712 ။ [PubMed]
10 ။ Tsujimura တစ်ဦးက, et al Matsumiya K ကို Matsuoka Y ကို, Takahashi T က, Kogas M က, Iwasa တစ်ဦး။ အသက်အရွယ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ Bioavailable testosterone ဟော်မုန်း။ J ကို Urol ။ 2003; 170: 2345-2347 ။ [PubMed]
11 ။ Mills က TM, Wiedmeier VT, အဆို့ vs. ကြွက်လိင်တံအတွက် erectile function ကို၏အန်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ Biol Reprod ။ 1992; 46: 342-348 ။ [PubMed]
12 ။ Mills က TM, Reilly CM, Lewis က RW ။ အန်ဒရိုဂျင်နှင့် penile စိုက်ထူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Androl ။ 1996; 17: 633-638 ။ [PubMed]
13 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏ Bancroft ဂျေဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ Clin Obstet Gynaecol ။ 1980; 7: 253-281 ။ [PubMed]
14 ။ Reilly CM, အဆို့ VS, Mills က TM အလိုအလျောက်။ အန်ဒရိုဂျင်ဟာ Corpus cavernosum အတွက်သွေးကြောချောမွေ့ကြွက်သားများ alpha-adrenergic တုန့်ပြန် modulate ။ J ကို Androl ။ 1997; 18: 26-31 ။ [PubMed]
15 ။ Carani ကို C, Bancroft J ကို, Granata တစ်ဦးက, Del ရီယို, G, Marrama P. Testosterone နဲ့ erectile function ကို, nocturnal penile tumescence နှင့်မာကျောမှု, နှင့် hypogonadal နှင့် eugonadal အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုမှ erectile တုံ့ပြန်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 1992; 17: 647-654 ။ [PubMed]
16 ။ seo SI ကင်မ် SW, Paick JS ။ penile တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လျှပ်စစ်ဆွနှင့်ကြွက်များတွင် penile NOS လှုပ်ရှားမှုမှ erectile တုံ့ပြန်မှု။ အာရှ J ကို Androl ။ 1999; 1: 169-174 ။ [PubMed]
17 ။ Morales တစ်ဦးက, Johnston B, Heaton JP, hypogonadal ခွန်အားမရှိခြင်းများအတွက် Lundie အမ် testosterone ဖြည့်စွက်: ထဲကဓာတုပစ်စညျးအစီအမံများနှင့်ကုထုံးရလဒ်များ၏အကဲဖြတ်။ J ကို Urol ။ 1997; 157: 849-854 ။ [PubMed]
18 ။ Isidori လေး, Giannetta အီး, Gianfrilli: D, ဂရိ EA ၏, Bonifacio V ကို, Aversa တစ်ဦးက, et al ။ အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု: တစ် Meta-analysis သည်၏ရလဒ်များကို။ Clin Endocrinol (Oxf) 2005; 63: 381-389 ။ [PubMed]
19 ။ က de Tejada IS ။ ကုသရန်ခက်ခဲသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုစဉ်းစား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် PDE-5 inhibitor ကုထုံးပိုကောင်းအောင်များအတွက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2004; 16 (ပျော့ပျောင်း 1): S40-S42 ။ [PubMed]
20 ။ ဟွမ် TI, Chen ကသူ, Tsai TF, လင်း YC ။ တစ်ဦးတည်း sildenafil မှတုံ့ပြန်ခြင်း hypogonadal လူနာတွေအတွက်အန်ဒရိုဂျင်နှင့် sildenafil ၏ပေါင်းလိုက်သောအသုံးပြုခြင်း။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2006; 18: 400-404 ။ [PubMed]
21 ။ Morley je, Tariq SH ။ လိင်နှင့်ရောဂါများ။ Clin သက်ကြီးရွယ်အိုများ Med ။ 2003; 19: 563-573 ။ [PubMed]
22 ။ Buvat J ကို, Montorsi က F, မဂ္ဂီကို M, Porst H ကို, Kaipia တစ်ဦးက, Colson MH, et al ။ Hypogonadal ယောက်ျား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (TADTEST လေ့လာမှု) J ကိုလိင် Med ၏ကုသမှုထဲမှာ 5% hydroalcoholic testosterone ဟော်မုန်းဂျယ်လ်နှင့်အတူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ပုံမှန်ကနေ PDE1 inhibitor tadalafil အကျိုးကျေးဇူးမှ nonresponders ။ 2011; 8: 284-289 ။ [PubMed]
23 ။ Beutel ME, Wiltink J ကို, Hauck EW, Auch: D, Behre HM, Brählerအီး, et al ။ Hypogonadism သုတေသနအုပ်စု။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြင်ပလူနာအိုမင်းအတွက်ဟော်မုန်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ parameters တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှု။ EUR Urol ။ 2005; 47: 749-755 ။ [PubMed]
24 ။ Zitzmann M က, တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး S က, အသက်ကြီးအတွက်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းတွေနဲ့တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်အန္တရာယ်များ၏ Nieschlag အီးအသင်းမှ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91: 4335-4343 ။ [PubMed]
25 ။ Buvat J ကို, မဂ္ဂီကို M, Gooren L ကို, Guay ကို AT, Kaufman J ကို, Morgentaler တစ်ဦးက, et al ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ endocrine ရှုထောင့်။ J ကိုလိင် Med ။ 2010; 7: 1627-1656 ။ [PubMed]
26 ။ Corona, G, Mannucci အီး, Petrone L ကို, Giommi R ကို, Mansani R ကို, Fei, L, et al ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် hypoactive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ Psycho-ဇီဝ Correlate ။ int J ကိုသင်ျခြို Res ။ 2004; 16: 275-281 ။ [PubMed]
27. Travison TG, Morley JE, Araujo AB, O'Donnell AB, McKinlay JB သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် libido နှင့် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကြားဆက်ဆံရေး။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91: 2509-2513 ။ [PubMed]
28 ။ Gades မိုင်, et al Jacobson DJ သမား, McGree ME, စိန့် Sauver JL, Lieber MM, Nehra တစ်ဦး။ သွေးရည်ကြည်လိင်ဟော်မုန်း, erectile function ကိုများနှင့်လိင် drive ကိုအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့များ: အမျိုးသားများအတွက်ကြားတွင် urinary ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၏ Olmsted ကောင်တီလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2008; 5: 2209-2220 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Corona, G, Jannini EA ၏, Mannucci အီး, Fisher ကအေဒီ, Lotti က F, Petrone L ကို, et al ။ ကွဲပြားခြားနားသော testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် ejaculatory ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ J ကိုလိင် Med ။ 2008; 5: 1991-1998 ။ [PubMed]
30 ။ Ahn HS, ပန်းခြံ CM, Lee က SW ။ အိုမင်းအထီးအတွက်လိင်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု။ BJU Int ။ 2002; 89: 526-530 ။ [PubMed]
31 ။ Funahashi T က, Matsuzawa Y. အဲဒါတွေက Metabolic syndrome ရောဂါ: လက်တွေ့သဘောတရားနှင့်မော်လီကျူးအခြေခံ။ အမ်း Med ။ 2007; 39: 482-494 ။ [PubMed]
32 ။ Pasquali R ကို, Casimirri က F, Cantobelli S က, Melchionda N ကို, Morselli Labate လေး, Fabbri ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ R ကို, et al ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ဟော်မုန်းများနှင့်အမျိုးသားများတွင်အင်ဆူလင်အပေါ်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖြန့်ဖြူး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဇီဝြဖစ်။ 1991; 40: 101-104 ။ [PubMed]
33 ။ Zumoff B, et al GW, Miller က LK, Rosner W က, seni R ကို, Seres DS, strain ။ plasma အခမဲ့နှင့် Non-လိင်-ဟော်မုန်း-binding-globulin-ခညျြနှောငျ testosterone ဟော်မုန်းအဝလွန်ခြင်း၏သူတို့ရဲ့ဒီဂရီမှအချိုးအစားအတွက်အဝလွန်အမျိုးသားများအတွက်ယုတ်လျော့နေကြသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1990; 71: 929-931 ။ [PubMed]
34 ။ Haffner သည် SM, Valdez RA, Stern ပာအမတ်, Katz က MS ။ အဝလွန်ခြင်း, အမျိုးသားများတွင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လိင်ဟော်မုန်း။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း Related Metab disorders ။ 1993; 17: 643-649 ။ [PubMed]
35 ။ Phillips က GB အထိ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည်လိင်ဟော်မုန်းနှင့်ဂလူးကို့စ-အင်ဆူလင်-lipid ချွတ်ယွင်းအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဇီဝြဖစ်။ 1993; 42: 116-120 ။ [PubMed]
36 ။ Seidel JC, Björntorp P ကို, Sjöström L ကို, Kvist H ကိုယောက်ျားအတွက် Sannerstedt R. Visceral အဆီစုဆောင်းခြင်းအပြုသဘောပေမယ့်အဆိုး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ, အင်ဆူလင်, ဂလူးကို့စ, နှင့် C-peptide အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဇီဝြဖစ်။ 1990; 39: 897-901 ။ [PubMed]
37 ။ Abbasi AA ကို, Mattson DE, Duthie Eh, Jr က Wilson ကနေ C, Sheldahl L ကို, saßအီး, et al ။ ပိန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုနှင့်လူထု-နေသောသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်စုစုပေါင်း adipose ဒြပ်ထုခန့်မှန်း။ J ကို Med သိပ္ပံဖြစ်၏။ 1998; 315: 188-193 ။ [PubMed]
38 ။ Baumgartner RN, ရေ DL, Gallagher: D, Morley je, Garry PJ ။ သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်အရိုးကြွက်သားထုထည်၏ခန့်မှန်း။ Dev မှအိုမင်းခြင်းဟာ Mech ။ 1999; 107: 123-136 ။ [PubMed]
39 ။ Vermeulen တစ်ဦးက, Goemaere S က, Kaufman JM ။ testosterone, ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အိုမင်း။ J ကို Endocrinol Invest ။ 1999; 22 (5 ပျော့ပျောင်း): 110-116 ။ [PubMed]
40 ။ Hamilton က EJ, Gianatti အီး, Strauss BJ, Wentworth J ကို, Lim က-Joon: D, ဘော်လ်တန်, D, et al ။ အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ကုထုံးနဲ့ကုသဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် visceral နှင့်အရေပြားအောက်ဆုံးဝမ်းဗိုက်အဆီတိုးပွါး။ Clin Endocrinol (Oxf) 2011; 74: 377-383 ။ [PubMed]
41 ။ Smith က MR, Finkelstein JS, McGovern FJ, Zietman AL, Fallon MA, Schoenfeld DA, et al ။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့ကုထုံးစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2002; 87: 599-603 ။ [PubMed]
42 ။ Haffner သည် SM, Karhapää P ကို, Mykkänen L ကို, Laakso အမ်အင်ဆူလင်ကိုခုခံ, ခန္ဓာကိုယ်အဆီဖြန့်ဖြူး, ယောက်ျားအတွက်လိင်ဟော်မုန်း။ ဆီးချိုရောဂါ။ 1994; 43: 212-219 ။ [PubMed]
43 ။ Dhindsa S က, Prabhakar S က, Sethi က M, Bandyopadhyay တစ်ဦးက, Chaudhuri တစ်ဦးက, type ကို2ဆီးချိုရောဂါအတွက် hypogonadotropic hypogonadism ၏ Dandona P. မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှု။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2004; 89: 5462-5468 ။ [PubMed]
44 ။ ding EL, သီချင်း Y ကို, Malik VS, endogenous လိင်ဟော်မုန်းနှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၏အန္တရာယ်၏လျူအက်စ်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2006; 295: 1288-1299 ။ [PubMed]
45 ။ Kapoor က D:, Aldred H ကို, Clark က S နဲ့, Channer KS, ဂျုံးစ် TH ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် hypogonadism ၏လက်တွေ့နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအကဲဖြတ်: bioavailable Testosterone နဲ့ visceral adiposity နှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2007; 30: 911-917 ။ [PubMed]
46 ။ Ogbera oa, ဆန်နီကို C, Olufemi က F, Wales အေ Hypogonadism နှင့်အမျိုးအစား2များတွင်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် subnormal စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်။ J ကို Coll Physicians မြင့်တက် Pak ။ 2011; 21: 517-521 ။ [PubMed]
47 ။ လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏ Haffner သည် SM, Shaten J ကို, Stern ပာအမတ်, Smith က GD, Kuller အယ်လ်အနိမျ့အဆင့်ဆင့်အမျိုးသားများတွင် Non-အင်ဆူလင်-မှီခိုများတွင်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ MRFIT သုတေသနအုပ်စု။ အကွိမျမြားစှာအန္တရာယ် Factor ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးစမ်းသပ်။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 1996; 143: 889-897 ။ [PubMed]
48 ။ အိုး JY, Barrett-ကော်အီး, Wedick မိုင်, Wingard DL ။ ချို Bernardo လေ့လာပါ။ Endogenous လိင်ဟော်မုန်းနှင့်အထက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: အချို Bernardo လေ့လာမှု။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2002; 25: 55-60 ။ [PubMed]
49 ။ Stellato RK, Feldman HA, Hamdy အို Horton က ES, McKinlay JB ။ testosterone, လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နှင့်လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု: အမက်ဆာချူးဆက်အထီးအိုမင်းလေ့လာမှုကနေအလားအလာရလဒ်များကို။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2000; 23: 490-494 ။ [PubMed]
50 ။ Aversa တစ်ဦးက, et al Bruzziches R ကို, Francomano: D, Rosano, G, Isidori လေး, Lenzi တစ်ဦး။ နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များနှင့်သွေးကြောအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း undecanoate ၏ဆိုးကျိုးများ: တစ် 24 လ Random, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ J ကိုလိင် Med ။ 2010; 7: 3495-3503 ။ [PubMed]
51 ။ ဂျုံးစ် TH, Arver S က, Behre HM, Buvat J ကို, Meuleman အီး, Moncada ငါ et al ။ TIMES2 စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ (ထို TIMES2 လေ့လာမှု) ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် testosterone အစားထိုး။ 2011; 34: 828-837 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ Kalinchenko SY, Tishova YA, Mskhalaya GJ, Gooren LJ, Giltay EJ သည်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူ hypogonadal ယောက်ျားအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏အမှတ်အသားများအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက်၏ Saad အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အကို double-မြင်နိုင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled မော်စကိုလေ့လာမှု။ Clin Endocrinol (Oxf) 2010; 73: 602-601 ။ [PubMed]
53 ။ Haidar တစ်ဦးက, Yassin တစ်ဦးက, Saad က F, အန်ဒရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့မှု Shabsigh R. သက်ရောက်မှုများသောထိန်းချုပ်မှုအပေါ်နှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်နှလုံးသွေးကြောထဲကဓာတုပစ်စညျးအန္တရာယ်အချက်များပေါ်တွင်။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2007; 10: 189-196 ။ [PubMed]
54 ။ Whitsel EA ၏, Boyko EJ, Matsumoto လေး, Anawalt bd, Siscovick DS ။ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်အသား testosterone ဟော်မုန်း Ester နှင့် plasma lipids: တစ် Meta-analysis သည်။ နံနက် J ကို Med ။ 2001; 111: 261-269 ။ [PubMed]
55 ။ Marine P ကို, Holmäng S က, et al Gustafsson ကို C, Jönsson L ကို, Kvist H ကို, Elander တစ်ဦး။ ဝမ်းဗိုက်အဝလွန်အမျိုးသားများ၏အန်ဒရိုဂျင်ကုသမှု။ အဝလွန်ခြင်း Res ။ 1993; 1: 245-251 ။ [PubMed]
56 ။ Yassin AA ကိုသာ testosterone ဟော်မုန်းနဲ့ကုသလနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏ Saad အက်ဖ်တိုးတက်မှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2007; 4: 497-501 ။ [PubMed]
57 ။ Heufelder AE, Saad က F, Bunck MC, Gooren အယ်လ်ငါး-Two-ရက်သတ္တပတ်အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူကုသမှုပေါင်း transdermal testosterone ဟော်မုန်းဟာဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနောက်ကြောင်းပြန်နှင့်အသစ်ရောဂါအမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့် subnormal ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်များသောထိန်းချုပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ J ကို Androl ။ 2009; 30: 726-733 ။ [PubMed]
58 ။ Torkler S က, Wallaschofski H ကို, et al Baumeister SE, Völzke H ကို, Dörr M က, ဖေလဇ်မင်းက S ။ စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု, အဖြစ်အပျက်သွေးတိုးရောဂါနှင့်သွေးဖိအားအကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2011; 14: 176-182 ။ [PubMed]
59. Tajar A, Huhtaniemi အိုင်တီ၊ O'Neill TW, Finn JD, Pye SR, Lee DM, et al ။ EMAS အုပ်စု။ နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်း hypogonadism တွင် androgen ချို့တဲ့မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများ - European Male Aging Study (EMAS) J Clin Endocrinol Metab မှရလဒ်များ။ 2012; 97: 1508-1516 ။ [PubMed]
60 ။ Mulligan T က, Frick MF, Zuraw QC, Stemhagen တစ်ဦးကအနည်းဆုံး 45 နှစ်ပေါင်းအသက်ယောက်ျားအတွက် hypogonadism ၏ McWhirter C. ပျံ့နှံ့နေတဲ့: အသလေ့လာမှု။ int J ကို Clin Pract ။ 2006; 60: 762-769 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ စတိန်း BJ, Scalia R. Adiponectin: တစ် adipocytes ချိတ်ဆက်ဝတ္ထု adipokine နှင့်သွေးကြော function ကို။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2004; 89: 2563-2568 ။ [PubMed]
62 ။ Ryo က M, Nakamura T က, Kihara S က, Kumada M က, Shibazaki S က, Takahashi က M, et al ။ အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါတစ် biomarker အဖြစ် Adiponectin ။ Circ ဂျေ 2004; 68: 975-981 ။ [PubMed]
63 ။ Nishizawa H ကို, Shimomura ငါ Kishida K သည် Maeda ဟာ N ကို, Kuriyama H ကို, Nagaretani H ကို, et al ။ အန်ဒရိုဂျင်ပလာစမာ adiponectin တစ်ခုအင်ဆူလင်-မလွဲမသွေ adipocyte-ဆင်းသက်လာပရိုတိန်းလျော့ကျသွားသည်။ ဆီးချိုရောဂါ။ 2002; 51: 2734-2741 ။ [PubMed]
64 ။ Lanfranco က F, Zitzmann M က, Simoni M က, Nieschlag အီး Serum hypogonadal ယောက်ျားအတွက်အဆင့်ဆင့် adiponectin: testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Clin Endocrinol (Oxf) 2004; 60: 500-507 ။ [PubMed]
65 ။ Tsujimura တစ်ဦးက, Takada က S, Matsuoka Y ကို, Nakayama J ကို, Takao T က, Miyagawa Y ကို, et al ။ နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism လက္ခဏာတွေနှင့်အတူလူနာအတွက် Adiponectin နှင့် testosterone ဟော်မုန်း: link တစ်ခုရှိပါသလော int J ကို Urol ။ 2009; 16: 830-835 ။ [PubMed]
66 ။ Muller က M, Grobbee DE, Tonkelaar ငါ Lambert SW, ဗန် der Schouw YT Den ။ Endogenous လိင်ဟော်မုန်းများနှင့်အိုမင်းယောက်ျားအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2005; 90: 2618-2623 ။ [PubMed]
67 ။ Laaksonen DE, Niskanen L ကို, Punnonen K ကိုNyyssönen K ကို Tuomainen TP, Valkonen VP, et al ။ Testosterone နဲ့လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2004; 27: 1036-1041 ။ [PubMed]
68 ။ Liao CH, Huang က CY လီ hy, ယု HJ, ချင်းမိုင် HS, လျူ CK ။ Testosterone နဲ့လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin ထိုင်ဝမ်အမျိုးသားများတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်အတူသိသာအသင်းအဖွဲ့ရှိသည်။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2012; 15: 1-6 ။ [PubMed]
69 ။ Lin က JW, Lee က JK, Wu CK, Caffrey JL, Chang-MH, Hwang JJ, et al ။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ, testosterone ဟော်မုန်းများနှင့်အမျိုးသားများတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသေဆုံးမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2011; 8: 2350-2360 ။ [PubMed]
70 ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် JS, ဗန် der Tweel ငါ Grobbee DE, Emmelot-Vonk MH, ဗန် der Schouw YT ။ testosterone, လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ: စူးစမ်းလေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ int J ကို Epidemiol ။ 2011; 40: 189-207 ။ [PubMed]
71 ။ Katabami T က, Kato H ကို, Asahina T က, Hinohara S က, ရှင် T က, Kawata T က, et al ။ သွေးရည်ကြည်အခမဲ့ Testosterone နဲ့ဂျပန်အမျိုးသားများတွင်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ။ Endocr ဂျေ 2010; 57: 533-539 ။ [PubMed]
72 ။ Akishita M က, Fukai က S, Hashimoto က M, Kameyama Y ကို, Nomura K ကို Nakamura T က, et al ။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်လူလတ်ပိုင်းဂျပန်အမျိုးသားများတွင်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း၏အသင်းမှ။ Hypertens Res ။ 2010; 33: 587-591 ။ [PubMed]
73 ။ Corona, G, Monami M က, Rastrelli, G, Aversa တစ်ဦးက, Tishova Y ကို, Saad က F, et al ။ Testosterone နဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ: တစ် Meta-analysis သည်လေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2011; 8: 272-283 ။ [PubMed]
74. Bojesen A, Kristensen K, Birkebaek NH, Fedder J, Mosekilde L, Bennett P ။ အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ Klinefelter ရဲ့ရောဂါမကြာခဏဖြစ်ပြီးဝမ်းဗိုက်အဝလွန်ခြင်းနှင့် hypogonadism နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2006; 29: 1591-1598 ။ [PubMed]
75 ။ Corona, G, Mannucci အီး, Schulman ကို C, Petrone L ကို, et al Mansani R ကို, Cilotti တစ်ဦး။ Psychobiologic အဆိုပါဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ EUR Urol ။ 2006; 50: 595-604 ။ [PubMed]
76 ။ Smith က MR, Lee က H ကိုသန် DM ။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာများအတွက်စုစုပေါင်းအန်ဒရိုဂျင်ပိတ်ဆို့နေစဉ်အတွင်းအင်ဆူလင် Sensitivity ကို။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91: 1305-1308 ။ [PubMed]
77 ။ Corona, G, Rastrelli, G, Monami M က, Guay တစ်ဦးက, Buvat J ကို, Sforza တစ်ဦးက, et al ။ တစ်ဦး Meta-သရုပ်ခွဲလေ့လာမှု: အမျိုးသားများတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသေဆုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ် Hypogonadism ။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2011; 165: 687-701 ။ [PubMed]
78 ။ Traish လေး, Saad က F, Feeley RJ, Guay အေ testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့၏မှောင်မိုက်ဘက်: III ကို။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများ။ J ကို Androl ။ 2009; 30: 477-494 ။ [PubMed]
79 ။ Yassin AA ကို, Saad က F, Gooren LJ ။ ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ, testosterone ဟော်မုန်းချို့တဲ့ခြင်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ဦးတည်းလာခဲ့ပါဘူး။ Andrologia ။ 2008; 40: 259-264 ။ [PubMed]
80 ။ Mäkinen J ကို, Järvisalo MJ, Pöllänen P ကို, Perheentupa တစ်ဦးက, Irjala K ကို Koskenvuo M က, et al ။ andropausal လူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်တိုးမြှင့် carotid သွေးကြော။ J ကို Am Coll Cardiol ။ 2005; 45: 1603-1608 ။ [PubMed]
81 ။ Akishita M က, Hashimoto က M, Ohike Y ကို, Ogawa S က, Iijima K ကို eto M က, et al ။ အနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအမျိုးသားများတွင် endothelial ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုလွတ်လပ်သောပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Hypertens Res ။ 2007; 30: 1029-1034 ။ [PubMed]
82 ။ et al Empen K ကို Lorbeer R ကို, Dörr M က, ယုန် R ကို, Nauck M က, Gläser S က။ အမျိုးသားများတွင် endothelial function ကိုအတူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏အစည်းအရုံး: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို။ Arterioscler Thromb Vasc Biol ။ 2012; 32: 481-486 ။ [PubMed]
83 ။ et al Mäkinen JI, Perheentupa တစ်ဦးက, Irjala K ကိုPöllänen P ကို, Mäkinen J ကို, Huhtaniemi ငါ။ နှောင်းပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်း hypogonadism လက္ခဏာတွေနဲ့အတူလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင် Endogenous Testosterone နဲ့ brachial သွေးလွှတ်ကြော endothelial function ကို။ အိုမင်းအမျိုးသား။ 2011; 14: 237-242 ။ [PubMed]
84 ။ ဗန်တွင်း Beld AW, bot တွေကို ML, Janssen ဂျာ Pols HA, Lambert SW, Grobbee DE ။ သက်ကြီးရွယ်အိုလူ Endogenous ဟော်မုန်းနှင့် carotid သွေးကြော။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 2003; 157: 25-31 ။ [PubMed]
85 ။ Fukui M က, Kitagawa Y ကို, Nakamura N ကို, Kadono M က, Mogami S က, Hirata ကို C, et al ။ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် carotid သွေးကြောအကြားအသင်းမှ။ ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှု။ 2003; 26: 1869-1873 ။ [PubMed]
86 ။ de Pergola, G, Pannacciulli N ကို, Ciccone M က, Tartagni M က, Rizzon P ကို, Giorgino R. အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပလာစမာအဆင့်ဆင့်အဆိုးအဝလွန်နှင့်အဝလွန်ဂလူးကို့စဒဏ်ခံငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများတွင်အဖြစ်များ carotid သွေးလွှတ်ကြောများ၏ intima မီဒီယာအထူနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ int J ကိုအဝလွန်ခြင်း Related Metab disorders ။ 2003; 27: 803-807 ။ [PubMed]
87 ။ Svartberg J ကို, ဗွန်Mühlen: D, Mathiesen အီး, Joakimsen အိုBønaa KH, Stensland-Bugge အီးအနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအမျိုးသားများတွင် carotid သွေးကြောနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ J ကို International Med ။ 2006; 259: 576-582 ။ [PubMed]
88 ။ Tsujimura တစ်ဦးက, et al Yamamoto R ကို, Okuda H ကို, Yamamoto K ကို Fukuhara S က, Yoshioka ငါ။ အနိမျ့သွေးရည်ကြည်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလူလတ်ပိုင်းဂျပန်အမျိုးသားများတွင် carotid intima မီဒီယာအထူနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Endocr ဂျေ 2012; 59: 809-815 ။ [PubMed]
89 ။ Muller က M, ဗန်တွင်း Beld AW, bot တွေကို ML, Grobbee DE, Lambert SW, ဗန် der Schouw YT ။ Endogenous လိင်ဟော်မုန်းများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူ carotid သွေးကြောများ၏တိုးတက်မှု။ စောင်ရေ။ 2004; 109: 2074-2079 ။ [PubMed]
90 ။ ဂျုံးစ် TH, Saad အက်ဖ်အန္တရာယ်အဘို့အအချက်များနှင့်, atherosclerotic ဖြစ်စဉ်ကို၏ပြုပြီအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှု။ သွေးကြော။ 2009; 207: 318-327 ။ [PubMed]
91 ။ Keymel S က, Kalka ကို C, Rassaf T က, Yeghiazarians Y ကို, Kelm M က, Heiss C. ချို့တဲ့ endothelial progenitor ဆဲလ် function ကိုအသက်အရွယ်-မှီခို carotid ရင်းနှီးသော thickened ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အခြေခံပညာ Res Cardiol ။ 2008; 103: 582-586 ။ [PubMed]
92 ။ Foresta ကို C, Caretta N ကို, Lana တစ်ဦးက, De Toni L ကို, Biagioli တစ်ဦးက, Ferlin တစ်ဦးက, et al ။ hypogonadal ယောက်ျားအတွက် endothelial progenitor ဆဲလ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့၏လျှော့ချအရေအတွက်ကို။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91: 4599-4602 ။ [PubMed]
93 ။ ဝက်ဘ်က CM, McNeill JG, Hayward CS, က de Zeigler: D, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်သွေးကြောဆိုင်ရာ vasomotor စည်းမျဉ်းအပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏ Collins P. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စောင်ရေ။ 1999; 100: 1690-1696 ။ [PubMed]
94 ။ အင်္ဂလိပ် KM, မြင်း RP, ဂျုံးစ် TH, ရေငုပ်သမား MJ, Channer KS ။ ကျပန်း, ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု: low-ထိုး transdermal testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးနာတာရှည်တည်ငြိမ် angina နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် angina တံခါးခုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ စောင်ရေ။ 2000; 102: 1906-1911 ။ [PubMed]
95 ။ Malkin CJ, Pugh PJ, မောရစ် PD, ကယ်ရီ Ke, ဂျုံးစ် RD, ဂျုံးစ် TH, et al ။ angina နှင့်အတူ hypogonadal အမျိုးသားများတွင် testosterone အစားထိုးအသက်တာ၏ ischemic တံခါးခုံနှင့်အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ နှလုံး။ 2004; 90: 871-876 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96 ။ Mathur တစ်ဦးက, Malkin ကို C, Saeed B, Muthusamy R ကို, ဂျုံးစ် TH, ယောက်ျားအတွက် angina တံခါးခုံနှင့် atheroma အပေါ် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံး၏ Channer K. long-term အကြိုးခံစားခှငျ့။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2009; 161: 443-449 ။ [PubMed]
97 ။ Akishita M က, Hashimoto က M, Ohike Y ကို, Ogawa S က, Iijima K ကို eto M က, et al ။ သွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူဂျပန်အမျိုးသားများတွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ်အနိမျ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို။ သွေးကြော။ 2010; 210: 232-236 ။ [PubMed]
98 ။ Buvat J ကို, မဂ္ဂီကို M, Guay တစ်ဦးက, တောရက်စ် LO ။ အမျိုးသားများတွင် testosterone ချို့တဲ့: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက်စံလည်ပတ်မှုလုပျထုံးလုပျနညျး။ J ကိုလိင် Med ။ 2013; 10: 245-284 ။ [PubMed]
99 ။ ယုန် R ကို, Völzke H ကို, Steveling တစ်ဦးက, Krebs တစ်ဦးက, ဖေလဇ်မင်း SB, Schöflကို C, et al ။ အနိမျ့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် 20-79 အသက်ယောက်ျား၏လူဦးရေ-based ဆောင်များတွင်အတွက်သေဆုံးမှု၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ EUR နှလုံးဂျေ 2010; 31: 1494-1501 ။ [PubMed]
100 ။ Khaw KT, Dowsett M က, Folkerd အီး, Bingham S က, Wareham N ကို, Luben R ကို, et al ။ ကြောင့်လူအပေါငျးတို့သအကြောင်းတရားများ, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ကင်ဆာမှ Endogenous Testosterone နဲ့သေဆုံးမှု:-Norfolk (EPIC-Norfolk) အလားအလာပြည်သူ့အင်အားလေ့လာမှုထဲမှာကင်ဆာသို့ဥရောပအလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စောင်ရေ။ 2007; 116: 2694-2701 ။ [PubMed]
101 ။ Menke တစ်ဦးက, Guallar အီး, Rohrmann S က, နယ်လ်ဆင် WG ကို, Rifai N ကို, Kanarek N ကို, et al ။ လိင် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှင့်အမေရိကန်လူသည်သေမင်း၏အန္တရာယ်။ နံနက် J ကို Epidemiol ။ 2010; 171: 583-592 ။ [PubMed]
102 ။ Ruige JB, မာမွတ်လေး, De Bacquer: D, Kaufman JM ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင် Endogenous Testosterone နဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ: တစ် Meta-analysis သည်။ နှလုံး။ 2011; 97: 870-875 ။ [PubMed]